Sivanina ny antsipirian'ny takelaka LG G PAD 2 vaovao | Androidsis
alexis martinez | | Takelaka Android
Hatramin'ity taona ity dia vitsy ny fanambarana momba takelaka vaovao hitantsika, saingy miova tsikelikely izany ary porofon'izany ny fanadihadihana nataon'ilay mpiara-miasa amintsika Francisco Ruiz tao amin'ilay takelaka Cube I7 CX Remix OS. Marina fa nihena be ny varotra takelaka hatramin'ny nisehoan'ny voalohany ireo fitaovana ireo fa ny mpamokatra isan-karazany amin'ireo fitaovana ireo dia manohy miasa ka amidy indray ireo karazana vokatra ireo toy ny tamin'ny niandohany.
LG dia tsy iray amin'ireo mpanamboatra malaza indrindra raha resaka takelaka, saingy na izany aza, ny orinasa Koreana dia nanao ilay fitaovana hafahafa mahaliana. Angamba iray amin'ireo fitaovana mifandraika indrindra amin'izany ny takelaka LG G Pad 8.3 ho an'ny famolavolana paikady, ny fitaovany ary ny fananana voninahitra ho fitaovana Google Play Edition, mamela anao hanana kinova tsy miova amin'ny rafitra fiasa Android. Ny LG G Pad 8.3 dia natomboka efa ho roa taona lasa izay ary ankehitriny ny mpamokatra monina any Korea Atsimo dia miasa amin'ny izay toa ny kinova vaovao amin'ity takelaka malaza ity.
Ilay LG G Pad 2 voalaza dia tafaporitsaka tao amin'ny tambajotra sosialy sinoa Weibo. Ity fivoahana ity dia mampiseho antsipiriany vitsivitsy momba izay mety ampidirin'ny fitaovana Koreana manaraka. Raha mandeha amin'ny drafitra sy honohono ny rehetra, dia ny efijery misy anao 8,3 santimetatra miaraka amin'ny famaritana avo lenta (1900 x 1200 teboka). Ao anaty no ahitantsika processeur Snapdragon 805 novokarin'i Qualcomm ary miaraka amin'ity SoC ity, hiaraka aminao izy ireo Fahatsiarovana RAM 3 GB.
Anisan'ireo fepetra voafaritra hafa, izay tsy dia manandanja loatra, hitantsika ny fomba hampitomboana ny fahatsiarovany anatiny raha oharina amin'ny taranaka voalohany, horesahintsika Fitaovana anatiny 32 GB izay hahafahantsika mitahiry ny karazana fampiharana, rakitra, sary ary horonan-tsary. Raha miresaka marina momba ilay fizarana sary isika dia hitantsika fa ny fakantsary lehibe indrindra ao an-damosin'ny fitaovana dia ho 8 Megapixels. Mikasika ny fakan-tsary eo aloha, dia ho MP 5 mety tsara amin'ny fanaovana selfie na fanaovana antso an-tsary.
Nilaza ilay famoahana fa handeha an-tsena ny takelaka marani-tsaina mandritra ny volana Oktobra, noho izany ny LG G Pad 2 dia tokony hihazakazaka eo ambanin'ny Android 5.1 Lollipop. Mikasika ny vidiny, ny endriny ary ny tsena hahitana azy, dia tsy maintsy miandry isika raha te hahalala bebe kokoa momba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Takelaka Android » Famaritana voasivana amin'ny takelaka LG G PAD 2 vaovao
Ny osy dia mandeha indray miaraka amin'ny Mountain Goat Mountain